DJ သမားဗီဒီယို Loop နှစ်ဦး (သမုဒ္ဒရာ) - Djs, Vjs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, နိုက်ကလပ် 2020
DJ သမားဗီဒီယို Loop နှစ်ဦး (သမုဒ္ဒရာ)
သင့်ရဲ့အစုစဉ်အတွင်းအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်များအတွက်အခြေချမနေပါနဲ့! သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်သီချင်းဗီဒီယိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တောင်သင်ဆဲမယ့်အရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပုံရိပ်ယောင်များသပိတ်မှောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုကောင်းသေးပါကသင်တို့၏နာမနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DJ သမားကဗီဒီယိုကွင်း၏တဦးတည်းပါစေ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လူဦးမျက်နှာပြင်ပယ်သောကြောင့်သင့်ရဲ့ set ကိုလက်စသတ်နေသည်ထင်ရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်။
audio tags များနှင့်ဂီတကုတင်ဤဗီဒီယိုနဲ့ရရှိနိုင်ပါ, အသေးစိတျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
SKU: OCLoop2 အမျိုးအစား: Specials Products
ဗီဒီယိုကို DJ - စိတ်ကြိုက်အမည်နှင့်လိုဂိုကိုသင်ကစားနေသောသီချင်းဗီဒီယိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသည့်အခါသင့်ရဲ့ VJ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကစားရန် loops ။ ထပ်ခါထပ်ခါသင့်ရဲ့လိုဂို Play နှင့်ကျော်အစားအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ရှိခြင်း၏။ အရာအားလုံးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအသံ။ (လိုအပ်ပါကပေမယ့်အသံအသံ / ဂီတအိပ်ရာကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်)
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် djs, နိုက်ကလပ်, စားသောက်ဆိုင်, ဟိုတယ်နှင့်သာကာစီနိုလောင်းကစားရုံသည်။